Iingqekembe ezili-10 eziPhambili zeDeFi ngeNtengo yeNtengiso ngoJuni ka-2021 | Iingqekembe zeDeFi Iingqekembe ezili-10 eziPhambili zeDeFi - Deficoins.io
Ukuhlaziywa kwezeMali zeYearn
Uvandlakanyo lweMpawu eziSisiseko
Ijika le-DAO Ithokheni yokuHlola
Thenga uMqondiso wethu
Iingqekembe ezili-10 eziPhambili zeDeFi
Imarike yezorhwebo eyabelwe abasemagunyeni (DeFi) ifumene inzala ethe kratya kubantu abathanda i-crypto kule minyaka idlulileyo-batsala abatyali mali kwihlabathi liphela. Ngeyona ndlela ilula, iDeFi ligama elisetyenziselwa usetyenziso lwezezimali olwakhiwe kwitekhnoloji ye-blockchain- ejolise ekulawuleni idemokrasi kwimeko yezoqoqosho ngokutshintsha amaziko aphakathi.
Namhlanje, amaqonga e-DeFi anokubonelela ngenkangeleko epheleleyo yeenkonzo zezemali- ukusukela kurhwebo, ukuboleka, ukubolekisa, ukutshintshiselana okwenziwa ngabezomthetho, ulawulo lweeasethi, kunye nokunye.
Amaqonga aziwa kakhulu eDeFi ayilele ezabo iithokheni zemveli, njengendlela yokuqhuba ngokusebenza kwabo kunye nokukhuthaza abasebenzisi. Ukuba unomdla wokufumana isiqwenga sale ndawo yentengiso entsha kwangoko - utyalomali kwiingqekembe zeDeFi yenye yeendlela ezilungileyo zokuhamba.
Apha eDefiCoins.io-sijonga ezinye zezona ngqekembe zeDeFi zibalaseleyo kwimarike kwaye sifunde ngendima yabo ngaphakathi kwendalo yabo yeDeFi. Sikwachaza nenkqubo yendlela onokuthenga ngayo iingqekembe zeDeFi kwintuthuzelo yekhaya lakho ngaphandle kokuhlawula isenti kwirhafu yomrhwebi okanye iikhomishini.
Thenga iiDoFi zeMali kunye noMthengisi wethu oPhezulu
Iingqekembe ezili-10 ezigqibeleleyo zeDeFi 2021
Enkosi ngokunyuka kokuthandwa kunye nokuvela kweqonga elitsha leDeFi-uluhlu lweengqekembe zeDeFi lukhula rhoqo. Ngexesha lokubhalwa-itotali iyonke yentengiso kuyo yonke imboni yeDeFi ime ngaphezulu kwe- $ 115 yezigidigidi. Oku kukhulu kakhulu, ngakumbi xa ucinga ukuba mncinci kangakanani umcimbi weDeFi.
Nalu uluhlu lwezona ngqekembe zilungileyo ze-DeFi zili-10 zibe negalelo ekunyukeni kwale ndawo yentengiso yabelweyo.
1. Ukungatshintshi (UNI)
Ukungatshintshi kukutshintshiselana okwabelweyo okulawula indawo okwangoku okulawula imarike yeDeFi. Isebenzisa inkqubo yoMenzi weeMarike oZenzekelayo (i-AMM) ukuqinisekisa ukuba kukho ukuthengiswa okwaneleyo kweethokheni ze-ERC20 ezithengiswa kwindawo yayo. Umgaqo-nkqubo ongatshintshiyo utsale abalandeli abanyanisekileyo ngokwesisombululo se-crypto-asethi. Ikuvumela ukuba ube nolawulo olupheleleyo kumaqhosha akho abucala, udityaniswe nezipaji zangaphandle, kwaye ikuvumela ukuba urhwebe ngentlawulo ephantsi.
Ithokheni ye-UNI yasungulwa ngumgaqo ongatshintshiyo ngoSeptemba 2020-njengendlela yokuvuza abasebenzisi bayo. Ingqekembe yeDeFi ingene kwintengiso ngexabiso lentengiso le- $ 2.94. Ngaphezulu kweenyanga ezimbalwa-ixabiso lemali sele linyukile laya kwi- $ 35.80. Ingqekembe yeDeFi inokubonwa njengenye yezona mpawu ziqhuba kakuhle kushishino- ngokunyuka okungaphezulu kwe-1,100% kwinyanga nje ezisibhozo.
Ikwayenye yezona ngqekembe zeDeFi zibalaseleyo ngokwexabiso, kunye nekepusi yentengiso engaphezu kwe- $ 18 yezigidigidi. Xa uthenga i-UNI, uya kufumana izikhuthazi kunye nezaphulelo kwiNkqubo engaguqukiyo. Umzekelo, kuxhomekeke kubungakanani beeUNI zokubamba - uya kuba nakho ukuvota kwimigaqo-nkqubo eyahlukeneyo ecetyelwe i-Uniswap ecosystem.
Umgaqo-nkqubo ongatshintshiyo sele uvele nesicwangciso seminyaka emine sokwabiwa kweethokheni ze-UNI. Kwimali zizonke eziibhiliyoni ze-1, i-60% igcinelwe amalungu oluntu angaguqukiyo. Ingqekembe yeDeFi sele ifumaneka ukurhweba kwiqonga elidumileyo lokugcina imali njengeCapital.com.
Thenga ukungatshintshi ngoku
2. Ikhonkco (LINK)
I-Chainlink yeyona ndawo isetyenziswa ngokubanzi kuthungelwano lwe-oracle ekhoyo ngoku kwintengiso yeDeFi. Yondla idatha yenyani yokwenyani kwiikhontrakthi ezi-smart kwi-blockchain- esebenza njengekhonkco phakathi kwemali engazange ibonwe ngaphambili ebuyela umva phakathi kwe-crypto DApps. Umboneleli ukhuphe eyakhe ithokheni yemveli LINK, enezixhobo ezininzi ezisebenzayo eqongeni.
Ndiyabulela ekunyukeni kokuthandwa kwamaqonga abelwe abomthetho, iChainlink iye yafumana ukukhula okumandla ukusukela oko yasungulwa ngo-2019. Iguqukile yafikelela kwinqanaba apho inokuxhasa khona amanye amaphulo e-crypto anokuba nexabiso kwi-Chainlink ecosystem.
Ngokubhekisele kwiimali zentengiso, i-LINK yenye yeengqekembe zeDeFi ezithandwayo ngalo mzuzu-ngoqingqo-mali olungaphezulu kwe- $ 14 yezigidigidi. Ingqekembe ye-DeFi yangena ngo-2021 ngexabiso le- $ 12.15. Ngexesha lokubhala, ngo-Epreli 2021 -ixabiso le-LINK ukusukela oko kwabetha onke amaxesha aphakamileyo kwi-44.36 yeedola. Uninzi lucinga ukuba lo mkhwa unyukayo uya kuqhubeka ekuhambeni kwexesha.
Kule minyaka idlulileyo, uChainlink ubonakalise ukuba lelinye lawona maqonga mahle eDeFi ukuze agcine ukubaluleka kwawo kolu shishino. Njengoko ijonge ukwandisa ukusebenza kweqonga layo leDeFi, i-LINK iya kuba nakho ukubonelela abanye abaphuhlisi beDeFi ngokuguquguquka okongeziweyo. Ukujonga le miba, ithokheni ye-LINK ngokuqinisekileyo yenye yezona ngqekembe zeDeFi ziqwalaselwe ngo-2021.
Thenga i-Chainlink ngoku
3. IDAI (DAI)
Kulabo abangaziyo, enye intengiso yezemali yeemali zokukhuphela kunye neengqekembe zeDeFi zidume ngokuzinza. Kulabo bajonge ukunqanda ukuhla kwamaxabiso, ingqekembe yeDAI inokuba ngumdla. Ngamafutshane, le ngqekembe ye-DeFi crypto yakhiwe kwi-Ethereum blockchain kwaye ixabiso layo likhonkxiwe kuleyo yedola yaseMelika.
Ngapha koko, i-DAI yindawo yokuqala yokwabela abaphantsi amagunya, i-asethi ye-crypto exhaswe ngohlobo lwayo. Le ngqekembe yeDeFi iphuhliswa sisoftware evulekileyo yomenzi weSoftwareDAO Protocol- lelinye lawona maqonga mahle e-DeFi ukusebenzisa iikhontrakthi ezikrelekrele ukwakha usetyenziso olwahlukeneyo.
Okwangoku, i-DAI ine-capitalisation yentengiso ye- $ 4 yezigidigidi-iyenza ukuba ibe yenye yezona ngqekembe zeDeFi zisasazwayo. Inezinga lotshintshiselwano elibonisa ixabiso ledola yaseMelika ngokuchasene nezinye iimali ze-fiat. Njengoko unokucinga, olona thuba lubalulekileyo lokubeka i-DAI emngciphekweni kukunciphisa umngcipheko wokuvezwa kukungazinzi kweemarike ze-cryptocurrency.
Ukongeza, ukusebenzisa i-DAI endaweni yeefat currencies kunokukunceda ukunciphisa iindleko zokuthengiselana kunye nokulibaziseka okubandakanyekayo xa kuthengiswa kwiimarike zezemali. Ekugqibeleni, i-DAI zezona ngqekembe zihle ze-DeFi zohlobo lwazo-ke silindele izinto ezinkulu zeprojekthi eziya kule minyaka izayo.
Thenga iDAI ngoku
I-0x yiprotocol ye-DeFi evumela abaphuhlisi ukuba bazenzele ezabo ii-cryptocurrency exchange exchange. Ikwasebenza njengesisombululo esingagcinwanga se-DEX esivumela abasebenzisi ukuba bathengise ngokulula iithokheni ze-ERC20. Nangona kunjalo, umahluko obonakalayo kukuba kunye nenkxaso yayo yeethokheni ze-ERC20, utshintshiselwano lwe-0x lukwanceda i-ERC-721 crypto asethi. Ngamanye amagama, oku kuyenza indawo yokuthengisa ngaphandle kwemvume kwibala elibanzi leemali zemali zedijithali.
Ngo-2017, umgaqo-nkqubo we-0x ovulekileyo wazisa i-0x (ZRX) yemali. Njengazo zonke ezinye iingqekembe eziphezulu zeDeFi, ingqekembe yeZRX ikwaqhuba kwi-Ethereum blockchain kwaye yayenzelwe ukuba incedise kulawulo lwendalo yayo. Nangona kunjalo, ngo-2019 - ingqekembe ye-0x yabelwa izinto eziluncedo kakhulu, ezinje ngokuma kwamandla kubanikezeli bemali.
I-0x iqhube kakuhle kakhulu ukusukela ekuqaleni kuka-2021. Ngapha koko, ingqekembe yeDeFi sele inyukile ngexabiso elingaphezulu kwama-500% - ifikelela kwinqanaba eliphezulu leedola ezi-2.33 ngo-Epreli ka-2021. . Ukuba unomdla wokufikelela kwi-1.2x protocol, ungathengisa le thokeni ye-DeFi kuwo omabini amaqonga orhwebo abekwe kwindawo enye- njenge-broker elawulwayo eyiCapital.com.
Thenga i-0x ngoku
UMenzi (MKR) yenye yeengqekembe zeDeFi ezaphuhliswa liqela kwiProtocol kaMenziDAO. Ngelixa i-DAI yayijolise ekuziseni uzinzo, injongo yengqekembe yoMenzi kukusebenza njengophawu lwento eluncedo. Ngapha koko, ithokheni yeMKR DeFi isetyenziselwa ukugcina ixabiso le-DAI limiselwe kwi- $ 1. Ukufezekisa oku, ingqekembe yoMenzi inokwenziwa kwaye itshatyalaliswe ukulungelelanisa amaxabiso anyukayo afunyanwa kwindawo yentengiso ebanzi.
Abaphathi beMKR banoxanduva lokulungisa izikhokelo malunga ne-DAI solidcoin. Ukuba uza kutyala imali kuMenzi, uya kufumana amalungelo okuvota ngaphakathi kwendalo ye-MakerDAO.
Ngapha koko, uyakukwazi ukufumana inkuthazo njengembuyekezo yokuthatha kwakho inxaxheba kulawulo lweMenziDAO umthetho olandelwayo, njengemirhumo ehlisiwe kunye nexabiso lenzala elilungileyo. Ngentloko yentengiso engaphezulu kwe- $ 3 yezigidigidi, uMenzi uphakathi kweyona mali iphambili ye-10 yeDeFi kwimakethi ye-crypto. Ukuba i-DAI iza kuqhuba kakuhle kwindawo yokurhweba nge-cryptocur lwemali, oku kungabonisa kwakhona kwixabiso loMenzi weDeFi.
Thenga uMenzi ngoku
6. Ikhompawundi (COMP)
Ikhompawundi yenye yezona ndawo ziphambili zokuboleka kunye nokubolekisa ngeqonga ezenza ukuba abasebenzisi bafumane inzala kwiiasethi zabo ze-crypto. Iqonga lenze iiphuli zamanzi ezihlanganisiweyo ukulungiselela le njongo. Nje ukuba ubeke iiasethi zakho kwelinye lamachibi, uya kuba nakho ukuvelisa iiCoken njengembuyekezo.
Xa ufuna ukufikelela kwiiasethi zakho, unokuzikhulula ezi coken. Ngokukodwa, kuba inqanaba lotshintshiselwano lwee-coken lonyuka ngokuhamba kwexesha, uya kuba nakho ukufumana inzala kutyalo-mali lwakho. NgoJuni 2020, ikhompawundi yaphehlelela ithokheni yayo yemveli-COMP. Abaphathi bale thokheni yeDeFi banokufikelela kumalungelo okuvota kwiProtocol yeKhompawundi.
Iqonga lifumene ukurhweba okuninzi kwintengiso, kwaye ingqekembe yayo yeDeFi kutshanje idlulise imali eyimali yentengiso engaphezulu kwe- $ 3 yezigidigidi. Ikhompawundi yangena ngo-2021 ngexabiso le- $ 143.90. Ukusukela ngoko, ingqekembe kaDeffi idlule kwi-638 yeedola. Oku kuthetha ukuba kwiinyanga nje ezine zokurhweba-Ikhompawundi inyuke ngexabiso ngaphezulu kwe-350%.
Thenga ikhompawundi ngoku
I-Aave liqonga le-DeFi elivulekileyo elisebenza njengenkonzo yokubolekisa nge-crypto. Iprotocol yayo yokungagcini ukuvumela ukuba ufumane inzala kunye nokuboleka kwimpahla yakho ye-crypto. Eli qonga leDeFi laziswa okokuqala kwimarike yemali yedijithali ngo-2017.
Nangona kunjalo, ngelo xesha - iqonga lalibizwa ngokuba yi-ETHLend, kunye ne-LEND njengophawu lwayo lokuzalwa. Isebenza ikakhulu njengenkqubo yokwenza umdlalo ukudibanisa ababolekisi kunye nababolekisi. Kwi-2018, iqonga leDeFi labizwa ngokuba yiAave- longeze kwimisebenzi emitsha yokubolekisa.
Namhlanje, ingqekembe ye-AAVE inokufakwa kumgaqo olandelwayo ukufaka igalelo kukhuseleko nasekusebenzeni. Ngaphaya koko, ungonwabela ukubamba imbuyekezo kunye neefizi zezaphulelo kwiqonga leAave. Ingqekembe yeDeFi ineendawo zokuthengisa ezininzi-njengoko inezixhobo zokwenyani zehlabathi kwintengiso yemali mboleko ekhulayo.
Ikwayenye yeengqekembe zeDeFi eziphezulu ngokwexabiso, kunye nengeniso yentengiso engaphezulu kwe- $ 5 yezigidigidi. Ingqekembe ye-AAVE DeFi ibisonwabela imarike eqhubayo ukusukela ekuqaleni kuka-2021-inyuka ngexabiso ngaphezulu kwe-350% kwinyanga ezine.
Thenga iAave ngoku
8. Intsingiselo (SNX)
ISynthetix lelinye lamaqonga akhula ngokukhawuleza eDeFi kwintengiso yanamhlanje. Kusemva kotshintshiselwano olunikezelwe ngeoyile olufanelekileyo oluvumela abasebenzisi ukuba batshintshe iimpawu kwiqonga. Nangona kunjalo, yintoni eyenza iSynthetix yahluke kukuba ivumela abasebenzisi ukuba benze izinto zabo zokwenziwa- ezibizwa ngokuba yi 'Synths.' Ngamagama alula, iiSynths zizixhobo zemali ezilandelela ixabiso leasethi engaphantsi.
Ungathengisa ii-Synths ze-cryptocurrensets, ii-indices, kunye nezinye iiasethi zehlabathi zokwenyani ezinje ngegolide kutshintshiselwano olusemthethweni lweSynthetix. Nangona kunjalo, kuya kufuneka ubenayo i-SNX-ithokheni yemveli yeSynthetix ukubonelela ngesiqinisekiso ngokuchasene nee-Synths. Ngale ndlela, ngalo lonke ixesha urhwebo lwakho lwe-Synths, iithokheni zakho ze-SNX ziya kutshixelwa kwimvumelwano efanelekileyo.
Ukongeza, ithokheni yeSNX ikwasasaza isabelo semirhumo eqokelelweyo kubaninizo, ikuvumela ukuba ufumane umvuzo. Ukujonga oku kuluncedo olusemthethweni ngaphakathi kweqonga, imfuno yeethokheni zeSNX inokuqhubeka nokunyuka. Umqondiso sele uvele njengenye yezona ngqekembe zeDeFi zibalaseleyo, kunye nemali yentengiso engaphezulu kwe- $ 2 yezigidigidi. Kwisithuba seenyanga ezine ezidlulileyo, ixabiso lengqekembe yeSNX sele inyuke ngaphezulu kwe-120% ngexabiso.
Thenga iSynthetix ngoku
Imali yasungulwa ekuqaleni kuka-2020, ngenjongo yokubonelela ngezivuno eziphezulu ze-Ethereum, ii-solidcoins, kunye nezinye i-altcoins. Umgaqo-nkqubo unika amandla ngokusebenzisa inqaku elibizwa ngokuba yi 'Vault,' elinceda ukunciphisa iindleko eziphezulu zentengiselwano ye-Ethereum.
Ezemali zinethemba lokwenza lula umxholo we-DeFi kubatyali mali abatsha, ebavumela ukuba babenakho ukubuyisela ingeniso encinci. Eli qonga le-DeFi sele lifumene ingqalelo eyongezelelweyo kwintengiso ngokusungulwa kwethokheni yayo ye-YFI. Ingqekembe ye-DeFi ine-cap ephezulu yentengiso engaphezulu kwe- $ 1.5 yezigidigidi.
Nangona kunjalo, kunqongophele ukubonelelwa kweemali ezingama-36,666 kuphela - ezongeza kwixabiso leprojekthi yeDeffi. Ngexesha lokubhalwa, ingqekembe ye-YFI inexabiso elingaphezulu kwe- $ 42,564- enye yezona ziphezulu kwimarike. Eli linani elinomtsalane, kuthathelwa ingqalelo ukuba ingqekembe yaziswa kuphela ngoJulayi 2020- ngexabiso leedola ezili-1,050.
10.Ukutshintshwa kwepancake (CAKE)
I-PancakeSwap lutshintshiselwano olwabiweyo olusemthethweni oluvumela ukuba utshintshe iithokheni ze-BEP20 kwi-Binance Smart Chain, enye indlela elula nengabizi kakhulu ye-Ethereum. Ifana nokungaguquki, le DEX ikwasebenzisa inkqubo yoMenzi weNtengiso oZenzekelayo ukuvelisa amachibi okuhlawula amatyala. I-PancakeSwap yasungula i-CAKE yayo yethokheni yemveli ngo-Septemba ngo-2020. Abasebenzisi banokubeka i-CAKE kwelinye lamachibi amaninzi anikezelweyo ukuze bafumane amathokheni amaninzi ngokubuyisela.
Imirhumo esezantsi ehlawulweyo ukusukela yatsala uninzi lwabathandi beDeFi kweli qonga. -Ukuqhuba ixabiso lengqekembe ngokuthe chu kuye phezulu. Ithokheni yeCAKE ibonakalise irali yamaxabiso ephawulekayo kwikota yokuqala yowama-2021. Ingqekembe kaDeffi iqale unyaka ngeedola i-0.63 kwaye, ngo-Epreli 26, 2021 - yabetha i-33.83 yeedola.
Oku kuguqulela kwinzuzo engaphezulu kwama-5,000% kwiinyanga nje ezine. Ngexesha lokubhalwa, ithokheni ye-CAKE ikwenze ukuba imali yeentengiso ibe ngaphezulu kwe-5 yeebhiliyoni zeedola, iyenza ukuba ibe yenye yezona mpawu zisebenza kakuhle zeDeFi crypto yonyaka.
Ngaphandle kokuthetha, ukunyuka kokuthandwa kweengqekembe zeDeFi kubonisa ukuba icandelo elibanzi leDeFi lisendleleni yokufikelela kwintengiso ebanzi yemali. Iiprotokholi esidwelise apha ziyaqhubeka nokubonisa ukuba kukho ibango lokwenyani, kunye negumbi kwindawo yentengiso yehlabathi yeemveliso kunye neenkonzo ezifanelekileyo.
Oko kwathethi, kukho iindlela ezininzi ezinegalelo kule mpumelelo. Umzekelo, iithokheni zeDeFi inye kuphela yenkqubo ebanzi ye-DeFi ecosystem. Ngapha koko, ezi ziyaphuhliswa njengendlela yokuxhasa iinkqubo ezisemthethweni- ezibonelela ngamanye amathuba okuba wenze imali kwi-DeFi.
Ngale nto engqondweni, makhe sihlolisise amanye amaqonga e-DeFi alawula imarike namhlanje.
Thenga iPancakeSwap ngoku
Iiplatifomu ezigqibeleleyo zeDeFi 2021
Eyona njongo iphambili yeqonga le-DeFi kukwabela abaphantsi utyalo-mali kunye nenkqubo yorhwebo. Enye yezinto ezinomtsalane apha kukuba ezi zisombululo zibonelela ngokubonakala okuphezulu ngokuthelekiswa namaziko emali emveli.
Ezona ziqonga ze-DeFi zanamhlanje zixhotyiswe yi-dApp okanye iiprothokholi ezisemthethweni - ezakhiwe kwi-Bitcoin okanye i-Ethereum. Kukho iiprojekthi ezintsha ezingena kwimarike phantse inyanga nenyanga, zibonelela ngamathuba amatsha emali kubatyali zimali nakubarhwebi bazo zonke iintlobo nobukhulu.
Nazi ezinye zeendlela ii -apps kunye neenkqubo ezisetyenziswayo ezisetyenziswayo namhlanje:
Ukuboleka nokuboleka Iqonga leDeFi likuvumela ukuba uthathe imali mboleko kwimpahla yakho ye-crypto, ngaphandle kokuba ugqibe inkqubo ye-KYC, ujonge ikhredithi yakho, okanye ubeneakhawunti yebhanki. Unokuboleka imali yakho oyibambayo njenge-cryptocurrency njengembuyekezo yenzala, ukufaka isandla kulwakhiwo lweqonga leDeFi ekuthethwa ngalo.
Iimali zedijithali: I-wallet ye-DeFi ye-non-custodial ikuvumela ukuba ube nolawulo olupheleleyo kwii-asethi zakho nakwizitshixo zabucala kwindawo ekhuselekileyo.
Ukutshintshiselwa kwamanye amazwe: Amaqonga alungileyo eDeFi akwenza ukuba ususe isidingo sombutho ophakathi kwaye endaweni yoko uzibandakanye kurhwebo ngezivumelwano ezifanelekileyo.
Iiprotokholi zoLawulo lweeaseti: I-DeFi ixhasa iinkqubo-sikhokelo ezivumela abasebenzisi ukuba badibanise imali kwiimveliso zotyalo-mali ezinje ngotyalo-mali oluzenzekelayo kunye nokudityaniswa kweeasethi.
Imali mboleko engahambelaniyo: I-DeFi yenze kwalula kuwe ukufumana imali mboleko engakhuselekanga kwisiseko soontanga.
Iimpawu ezingashukumiyo: Ezona ziqonga zibalaseleyo zeDeFi ziya zisiba nenkxaso kwiiNFTs. Ezi ziithokheni ezikuvumela ukuba uphinde uguqule iasethi ngaphambili eyayingenakuguqulwa kwi-blockchain. Oku kunokubandakanya ubugcisa boqobo, ingoma, okanye iTwitter!
Isivuno Solimo: Le mveliso yeDeFi ikwenza ukuba ufumane inzala kwiiasethi zakho ze-crypto ngokuzibeka kwiqonga leDeFi.
Njengoko ubona, ubungakanani beshishini leDeFi bohluke kakhulu. I-Y0u inokufumana ukufikelela okucacileyo, okungenamda phantse kuyo nayiphi na inkonzo yezemali onokuyicinga- kwiiakhawunti zokonga, iimali mboleko, urhwebo, i-inshurensi, kunye nokunye.
Ke ungalifumana phi elona qonga liphambili le-DeFi eliza kukunika ukufikelela kwezona zinto zithembisayo zeli candelo? Apha ngezantsi, siphonononge ukhetho lwamaqonga aphezulu kunye nendlela onokuthi uzuze ngayo kuwo.
Yaziswa kwi-2018, i-YouHodler yenye yezona ndawo zibalulekileyo zokubolekisa nge-crypto kwimarike. Ngokuyintloko inkonzo yezemali ye-crypto-fiat ekubonelela ngembuyekezo yemveliso ephezulu kwiidipozithi zakho. Iqonga leDeFi lidibene neebhanki ezaziwayo eYurophu naseSwitzerland ukuqinisekisa ngokugcinwa okukhuselekileyo nokukhuselekileyo kweeasethi zakho zedijithali.
U-YouHodler uza nokudityaniswa notshintshiselwano lorhwebo olunikezela ngenkxaso yeemali ezininzi zeDeFi ezibalaseleyo- kubandakanya iCompound, i-DAI, i-Uniswap, i-Chainlink, uMenzi, kunye nokunye. Enye yezona zinto zibalulekileyo ze-YouHodler kukuba ikuvumela ukuba ubeke i-Bitcoin, okanye ezinye i-cryptocurrensets- ukuze uqale ukufumana inzala kwi-asethi kwangoko.
Isivumelwano ngasinye sokuboleka kunye nokuboleka kweli qonga luxwebhu olusemthethweni olubophelela ukulandela imigaqo ye-European Union. Unokufumana ukuya kuthi ga kwi-12.7% kwiidiphozithi zakho ze-crypto kwaye nayiphi na imbuyekezo oyenzayo iya kugcinwa ngokuthe ngqo kwisipaji sakho se-YouHodler veki nganye. Ngaphandle koku, unokufumana ukufikelela kwimali mboleko ye-crypto eqongeni. I-YouHodler ibonelela ngomlinganiso oncomekayo wemali mboleko-kwixabiso lama-90% kwii-cryptocurrensets eziphezulu ezingama-20 ezixhasiweyo.
Unokufumana imali mboleko kwiimali ze-fiat ezinje ngeedola zaseMelika, i-euro, iiSwitzerland francs, kunye neeponti zaseBritane. Imali mboleko inokurhoxiswa kwangoko kwiakhawunti yakho yebhanki okanye kwikhadi letyala. Kulabo banamava ngakumbi kwimakethi ye-DeFi ye-crypto, u-YouHodler ukwazise nezinye iimveliso ezimbini- iMultiHODL kunye neTurbocharge. Ngala manqaku, iqonga liza kutyala imali ngokuzenzekelayo kwiiasethi zakho kwimali mboleko ezininzi ukuze ufumane eyona mbuyekezo iphezulu.
Nangona kunjalo, kuthathelwa ingqalelo umngcipheko obandakanyekayo, le misebenzi isebenza kakuhle kubatyali zimali abanamava abakwaziyo ukungena nokuphuma kweemarike zezemali. Kwelinye icala, ukuba ujonge nje ukufumana umvuzo kwi-asethi yakho ye-crypto, emva koko u-YouHodler unokufumana imbuyekezo ephezulu kakhulu ngelixa ekuvumela ukuba ugcine iiasethi zakho kwindawo ekhuselekileyo.
INexo lelinye igama elidumileyo kwisithuba se-crypto. Iqonga lazise iimveliso ezininzi zemali ezinokuthi zithathe indawo yebhanki yesiqhelo ngeeasethi ze-crypto. I-Nexo ikuvumela ukuba ufumane inzala kwii-asethi ezili-18 ezahlukeneyo ze-crypto-kubandakanya imali yeDeFi enje nge-DAI kunye nomqondiso we-Nexo. Unokufumana ukuya kuthi ga kwi-8% yokubuyisa kwii-cryptocurrensets, ukuya kuthi ga kwi-12% kwiimali ezizinzileyo.
Umvuzo wakho uya kuhlawulwa kuwe yonke imihla. Ukongeza, unokufaka i-fiat currencies ezinje ngeeuros, iidola zaseMelika, kunye neeponti zaseBritane ukuvelisa imbuyekezo kuzo. Ngaphandle kweakhawunti yokonga i-crypto, uNexo ukwakuvumela ukuba ufumane imali mboleko kwangoko ngokudibanisa izinto zakho zedijithali.
Inkqubo yenziwe ngokuzenzekelayo-kwaye unokufumana isicelo sakho semali-mboleko ngaphandle kokuya kukhangelwa nakuphi na ukukhangelwa kwetyala. Ixabiso lenzala yemali mboleko ye-Nexo crypto iqala nge-5.90% ye-APR. Elona xabiso liphantsi lemali mboleko lisetelwe kwi- $ 50, kwaye unokufumana imigca yetyala ukuya kuthi ga kwi-2 yezigidi zeedola. INexo ikwaseke notshintshiselwano lwayo lwemveli lwemali, apho unokuthenga kwaye uthengise ngaphezulu kwezibini ze-cryptocurrency ezimbini.
Iqonga lenze inkqubo yeNexo Smart ukuqinisekisa ukuba ufumana elona xabiso liphezulu kwintengiso ngokudibanisa kwiindlela ezahlukeneyo zokutshintshiselana. Ngapha koko, uNexo ukwathembisa ukuba kuya kubakho amaxabiso atshintshayo xa usenza iodolo yentengiso. Ngokufana namanye amaqonga eDeFi, uNexo ukwasungule eyakhe imali yolawulo-umqondiso we-NEXO.
Ukubamba ithokheni ye-NEXO kukunika iimbasa ezininzi eqongeni- ezinje ngembuyekezo ephezulu kwiidipozithi zakho, kunye namaxabiso enzala asezantsi kwimali mboleko. Okubaluleke ngakumbi, uNexo lelinye lamaqonga ambalwa ahlawula izabelo kubanini beethokheni. Ngapha koko, iipesenti ezingama-30 zeenzuzo zizonke zale ngqekembe yeDeFi zisasazwa phakathi kwabanini beethokheni ze-NEXO-kuxhomekeke kubungakanani kunye nexesha lotyalo-mali.
Ukungatshintshi ngokungathandabuzekiyo lelinye lawona maqonga athandwa kakhulu eDeFi kwimarike ebanzi ye-cryptocurrency. Iqonga likuvumela ukuba uthengise nayiphi na ithokheni esekwe kwi-Ethereum ye-ERC-20 usebenzisa izipaji zabucala ezinjengeMetamask. Kwi-2020, i-Uniswap ixhase i-58 yezigidigidi zeedola kumthamo wentengiso- isenza ukuba ibe lelona tshintshiselwano likhulu kwilizwe lase-crypto. La manani anyuke nge-15,000% ukusuka kwi-2019-ebonisa ukuba kude kangakanani iqonga leDeFi lize nje ngaphezulu konyaka.
Enye yeenzuzo eziphambili zokungatshintshi kukuba akukho mfuneko yokuba ubeke iiasethi zakho eqongeni. Ngamanye amagama, esi sisicelo esingagcinwanga esisebenzisa amachibi okubhukuda endaweni yeodolo yeencwadi. Akukho sidingo sokuba ubhalise kwi-Uniswap protocol okanye ugqibe inkqubo ye-KYC.
Ungatshintsha phakathi kwayo nayiphi na ithokheni ye-ERC20 okanye ufumane ipesenti encinci yemirhumo eqokelelweyo ngokufaka nje echibini elinamanzi. Njengoko besitshilo ngokufutshane ngaphambili, i-Uniswap ikwanayo ithokheni yayo ye-UNI- enokukunika izabelo zokuvota kulawulo lomgaqo womnikezeli. Ingqekembe yeDeFi isandula ukunyuka ngexabiso, itsala umdla ngakumbi kumgaqo olandelwayo we-UNI.
Kutshanje, i-Uniswap ikwazise nohlobo lwayo lwamva nje lotshintshiselwano lwayo-olubizwa ngokuba yiViswap V3. Kuza kunye nokuhlawulwa kwemali eninzi kunye neerhafu. Oku kuvumela ababoneleli bemali ukuba bahlawulwe ngokwenqanaba lomngcipheko abalithathayo. Ezo zinto zenza i-Uniswap V3 yenye yezona AMM ziguquguqukayo ziyilelwe.
Iprothokholi engatshintshiyo ikwajolise ekuboneleleni ngokurhweba ngokurhabaxa okunokugqitha kunaniselwano oluphakathi. Olu hlaziyo lutsha lunokuqhuba ixabiso lethokheni ye-UNI DeFi ukuya phambili. Njengoko ubona, iqonga leDeFi liyaqhubeka ngokuguqukayo kwaye kungekudala linokongeza ezinye iimveliso ezinje ngemalimboleko ye-crypto kunye nokubolekisa ngendalo yayo esecaleni.
Yaziswa kwi-2018, iBlockFi iguqukile ukuba ibe yindawo yokuya kukhulisa iiasethi zakho zedijithali. Kule minyaka, iqonga leDeFi likwazile ukufumana ngaphezulu kwe-150 yezigidi zeedola kumanani abalulekileyo oluntu, kwaye bafumana abathengi abathembekileyo abalandelayo. IBlockFi ibonelela ngeentlobo ngeentlobo zeemveliso zemali ezijolise kubarhwebi abazimeleyo kunye nabeziko. IiAkhawunti zeNzala zeBhlokFi, i-BIAS ngamafutshane- ikuvumela ukuba ufumane inzala yokufikelela kwi-8.6% ngonyaka kwi-cryptocurrensets.
Njengamanye amaqonga eDeFi. IBlockFi iboleka ezi dipozithi zomsebenzisi kwabanye abantu nakubarhwebi bamaziko kwaye ihlawulisa inzala kubo - yona yona ihlawule abasebenzisi bayo. Oko kwathethi, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba iidiphozithi zomsebenzisi zinikwa ezona zinto ziphambili xa kuthelekiswa nobulungisa benkampani xa kufikwa kumba wokubolekisa.
IBlockFi ikwavumela abasebenzisi ukuba basebenzise iiasethi zabo zedijithali njengezibambiso, kwaye baboleke ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-50 zexabiso lesibambiso kwiidola zaseMelika. Njengoko ubona, oku kuncinci kakhulu kune-LTV ebonelelwa ngamanye amaqonga anjenge-YouHodler. Kwelinye icala, iimali mboleko zenziwa phantse kwangoko. Okokugqibela, olunye uncedo lweBlockFi kukuba ibonelela ngokungahlawulelwanga kutshintshiselwano kwiqonga layo.
Nangona kunjalo, amaxabiso otshintshiselwano mancinci xa kuthelekiswa nento onokuyifumana kwamanye amaqonga. Ngokubanzi, iBlockFi ibambe isikhundla sayo njengenye yeenkonzo zemali ezizezinye ezikhokelayo-ekuvumela ukuba usebenzise iiasethi zakho zedijithali ukufumana umvuzo, kunye nokufumana imali mboleko ekhawulezileyo ngokuchasene nayo.
Ekusungulweni kwasekuqaleni njenge-ETHLend, iAave yaqala njengendawo yentengiso apho ababolekisi be-crypto kunye nababolekisi banokuthetha-thethana ngemiqathango yabo ngaphandle kokuya kwiqela lesithathu. Ukusukela ngoko, iqonga leDeFi likhule laba sisiseko seDeFi esinika inani leemveliso zezemali. Amachibi okubhukuda ka-Aave okwangoku anika inkxaso ngaphezulu kwe-25 crypto, ezinzileyo, kunye neengqekembe zeDeFi.
Oku kubandakanya i-DAI, i-Chainlink, unyaka wemali, ukungatshintshi, i-SNX, uMenzi, kunye nokunye. Ukongeza, iAave ikhuphe eyayo ithokheni yolawulo-AAVE. Oku kwenza ukuba abaphathi beethokheni babe negalelo kulawulo lwe-Aave protocol. Ithokheni yeAAVE inokuxhonywa eqongeni ukuze ifumane inzala kunye neminye imivuzo.
I-Aave isebenza ikakhulu njengeqonga lokubolekisa nge-crypto. Ungaboleka kwaye uboleke iiasethi zedijithali kwiAave ngendlela egunyazisiweyo, ngaphandle kokuhambisa amaxwebhu e-AML okanye e-KYC. Njengombolekisi, uya kugcina ngokufanelekileyo iiasethi zakho kwindawo yokuhlawula amatyala. Inxalenye yephuli iya kubekelwa bucala njengendawo yokugcina ngokuchasene nokungazinzi ngaphakathi kweqonga leDeFi. Oku kukwenza kube lula kubasebenzisi ukuba barhoxise imali yabo ngaphandle kokuchaphazela ukuhlawula amatyala.
Ngapha koko, uya kuba nakho ukufumana inzala kwimali oyibonisayo eqongeni. Ukuba ufuna ukuthatha imali mboleko, iAave ikuvumela ukuba uboleke ngokubeka ngaphezulu izinto zakho zexabiso. I-LTV yemali mboleko oyifumanayo ukusuka kuma-50 ukuya kuma-75%.
Nangona kunjalo, ngaphandle koku, u-Aave ukwahlula ngokwawo ngokunikela ngezinye iimveliso ezizodwa-ezinje ngemali mboleko ye-crypto engakhuselekanga kunye nokutshintsha kwezinga. Siza kuthetha ngale nto ngakumbi kwi-'Crypto Loans kwiDeFi Platforms 'yecandelo lesi sikhokelo. Nangona kunjalo, sIindidi ezizodwa zetyala ziye zavumela iAave ukuba ifumane ukubambeka kwicandelo leDeFi. Ngapha koko, xa kuthelekiswa nezinye iinkqubo ze-DeFi ezikule ndawo, iAave ibonelela nge-arsenal eyahlukileyo yeempawu.
I-Celsius yenye yeqonga elisekwe kwi-blockchain eliphuhlise ithokheni yayo yemveli. Ithokheni yeCEL ngumqolo wenkqubo yendalo yeCelsius. Ithokheni ye-ERC-20 inokusetyenziswa ngaphakathi komgaqo weCelsius ukwandisa izibonelelo zakho kwiimveliso zayo zezemali.
Ngokumalunga nokusetyenziswa, i-Celsius ikuvumela ukuba ufumane inzala kwii-asethi zakho ze-crypto, ngenqanaba lenzala eliphezulu njenge-17.78%. Oku kungaphezulu komndilili wecandelo-nangona kunjalo, kuyakufuneka ubambe amathokheni e-CEL ukufumana imbuyekezo ephezulu. I-Celsius ikwavumela ukuba usebenzise i-cryptocurrency njengesibambiso sokuboleka imali ye-fiat okanye ezinye ii-asethi zedijithali.
Kwakhona, iqondo lenzala apha liyakhuphisana ngendlela emangalisayo - lisetelwe kuphela kwi-1% APR. Oku kukwimeko yokuba uneempawu ezaneleyo zeCEL ezibekwe eqongeni. Ngamagama alula, izibonelelo ozifumanayo kwiqonga zixhomekeke kakhulu kwisixa seCEL osiphetheyo. Kananjalo, ukuba unomdla wokusebenzisa i-Celsius, ingangumbono olungileyo ukongeza i-CEL kwipotifoliyo yakho ye-cryptocurrency.
Emva kwayo yonke loo nto, ezo zibambeleyo kwaye Iithokheni ze-CEL zesibambiso zinokufumana eyona mbuyekezo iphambili kwiidiphozithi zazo, kunye nokwehla kwenzala kwimali mboleko. Ngokwenzuzo eyinkunzi, ithokheni yeCEL inyuke nge-20% ngexabiso ukusukela ekuqaleni kowama-2021. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ukusetyenziswa kwethokheni yeCEL kunqunyelwe ngaphandle kwenkqubo yendalo yeCelsius.
ICompound Finance inokuqwalaselwa ngokulula njengenye yeenkqubo ezinkulu zokubolekisa kwicandelo leDeFi. Njengoninzi lwamanye amaqonga eDeFi ekuxoxwe ngawo namhlanje, umthetho olandelwayo weCompound wakhelwe kwi-Ethereum blockchain. Nangona yayiqale yabekwa embindini, ngokusungulwa kwethokheni yolawulo, iCompound ithatha amanyathelo ayo okuqala okuba ngumbutho oqhutywa luluntu.
Ngexesha lokubhalwa, iCompound ixhasa i-12 crypto kunye neengqekembe ezinzileyo- ezibandakanya inani lamathokheni eDeFi abalulekileyo. Indawo yokubolekwa kwemali kwi-crypto kwiCompound isebenza ngokufanayo kwamanye amaqonga eDeFi. Njengombolekisi, unako imali inzala kwimali yakho ngokongeza amatyala eqongeni. Ngelixa ubolekayo-unokufumana ukufikelela kwangoko kwimali mboleko ngu hlawula umdla.
Nangona kunjalo, yonke inkosazana iququzelelwa yimveliso entsha ebizwa ngokuba sisivumelwano se-cToken. Oku kukubonakaliswa kwe-EIP-20 yeeasethi ezingaphantsi - ezilandelela ixabiso le-asethi oyifakileyo okanye oyirhoxisileyo. Nakuphi na ukuthengiselana komgaqo olandelwayo weCompound kwenzeka ngeekhontrakthi zeToken. Ungazisebenzisa ekufumaneni inzala, nanjengesibambiso sokufumana imali-mboleko. Ungayenza 'i-mint' ukuze ufumane izandla zakho kwii-cokens okanye uboleke nge-Compound protocol.
Ikhompawundi ikwasebenzisa ialgorithm entsonkothileyo echaza amaxabiso enzala eqongeni. Kananjalo, ngokungafaniyo namanye amaqonga e-DeFi, iqondo lenzala liyahluka-kuxhomekeke kunikezelo nakwibango ngaphakathi komgaqo. Ngokusebenzisa ithokheni yolawulo, i-COMP-izicwangciso ezihlanganisiweyo zokufezekisa ukwabiwa kwabemi ngokupheleleyo. Oku kuyakwenziwa ngokubonelela ngamalungelo okuvota kunye nokunikezela ngenkuthazo kubanini beCompP kwiqonga layo leDeFi.
UMenziDAO lelinye lamaqonga okuqala eDeFi abambe iliso labatyali mali be crypto. Le projekthi yasungulwa ngo-2017 kwaye isebenza njengenkqubo yolawulo lwedijithali egunyazisiweyo. Ungafaka idigital ye-Ethereum esekwe kwi-cryptocurrensets kwaye uyisebenzise ukwenza i-mint yeqonga lomqondiso weqonga- iDAI. Njengoko besesitshilo ngaphambili, ixabiso lesipili seDAI lelo ledola laseMelika. I-DAI oyivelisayo kwi-MakerDAO inokusetyenziswa njengesibambiso ukuthatha imali mboleko.
Nangona kunjalo, khumbula ukuba ukutshintshisa ithokheni yakho ye-ERC-20 ukubuyisela i-DAI akukho simahla kwiqonga. Uya kuhlawuliswa umrhumo womenzi xa uvula igumbi. Le ntlawulo inokulumka amaxesha ngamaxesha kwaye iya kuhlaziywa ngokuzenzekelayo kwiqonga. Ngesi sizathu, ukuba usebenzisa iiVenkile zeMenzi, kungcono ukugcina iqondo lakho lokudibana liphezulu kangangoko unakho- ukuthintela ukupheliswa.
Ngaphandle kwendalo ye-MakerDAO, i-DAI isebenza njengayo nayiphi na enye imali yeDeFi. Ungayiboleka, okanye uyisebenzise ukuze ufumane umvuzo ongenanto. Kumaxesha akutshanje, i-DAI sele inyuse ukusebenza kwayo ukubandakanya ukuthengwa kweNFT, ukudityaniswa kwamaqonga emidlalo, kunye namashishini eCommerce. Ngaphandle kweDAI, uMenziDAO unemali eyongezelelweyo yolawulo-uMenzi. Njengakwezinye iingqekembe zeDeFi, ukubamba uMenzi kuya kukufumana ukufikelela kumalungelo okuvota kunye nemirhumo esezantsi eqongeni.
Amaqonga ekuxoxwe ngawo ngasentla anikezela ngombono kwinethiwekhi ye-DeFi eyandisiweyo eyakhiwayo namhlanje. Njengoko ihamba, ikamva lecandelo le-DeFi liya kugqitywa luluntu olungemva kwayo. Ukuba umzi-mveliso uyaqhubeka nokutsala umdla ongaphezulu, kuya kufuneka uboniswe kwixabiso ledoCo yeDeFi.
Njengoko ubona, umhlaba weDeFi uguqule icandelo lezemali. Ezi ziqonga ziphambili zeDeFi zijolise ekuguqulweni kweshishini ngokusebenzisa ubuchwephesha beBlockchain. Ngokulandelelana, uya kufumana ukufikelela elubala kunye nolawulo olungcono kwiiasethi zakho.
Ukuba uyakholelwa ukuba iDeFi inamandla amakhulu okulawula kwixesha elizayo, enye yezona zinto zibalulekileyo ekufuneka uzenzile iya kuba kukutyala imali kwiDeFi. Kwabo batsha kwindawo ye-cryptocurrency, uya kuxhamla kwisikhokelo esincinci kule ndawo. Ke ngoko, sibeke ndawonye isikhokelo sendlela yokuthenga ezona ngqekembe zeDeFi ezifanelekileyo kwicandelo elingezantsi.
Ungazithenga njani iiNgqekembe zeDeFi
Okwangoku, kuyathenjwa ukuba unombono oqinisekileyo wokuba zeziphi iiplatifomu zeDeFi, kwaye zeziphi iingqekembe zeDeFi ezilawula imarike ngoku. Ukuqinisekisa ukuba iingqekembe zeDeFi ozikhethileyo zinokuthengwa ngeyona ndlela ikhuselekileyo neyona inendleko- apha ngezantsi sihamba kwinkqubo inyathelo ngenyathelo.
Inyathelo 1: Khetha uMrhwebi oMiselweyo kwi-Intanethi
Iipulatifomu ezisemthethweni zinika ukufikelela okungagungqiyo kwiiasethi zedijithali. Nangona kunjalo, kwabo bafuna ukulumka ngakumbi kutyalo-mali lwabo, sicebisa ukuba ujonge lawulwa amaqonga. Umzekelo, zimbini iindlela zokuba uthenge ingqekembe ye-DeFi-enye nge-cryptocurrency utshintshiselwano, okanye kwi-intanethi umrhwebi.
Ukuba ukhetha ukutshintshiselana nge-cryptocurrency esembindini okanye eyabelweyo, awuyi kuba nakho ukukwazi ukuthenga iingqekembe zeDeFi ngokutshintshela imali ye-fiat. Endaweni yoko, kuya kufuneka uzinze kwiingqekembe ezinzileyo ezinje nge-USDT.
Kwelinye icala, ukuba ukhetha i-broker e-intanethi elawulwayo enjengeCapital.com - uya kuba nakho ukurhweba ngeemali zeDeffi kwaye uxhase ngokulula iakhawunti yakho ngeedola zaseMelika, i-euro, iiponti zaseBritane, nangaphezulu.
Ngapha koko, unokufaka kwangoko imali kwi-debit / kwikhadi letyala kunye ne-e-wallet njengePaypal.
Kulabo abangaziyo, iCapital.com liqonga lokuthengisa elidumileyo leCFD elilawulwa zizo zombini iCAA eUK naseCySEC eCyprus.
Iqonga lixhasa umgca omde weemarike zeemali zeDeFi- ezinje nge-LINK, i-UNI, i-DAI, i-0x, kunye neemfumba ezingaphezulu.
Nangona kunjalo, ukuba umrhwebi wakho okhethiweyo kwi-Intanethi akaboneleli ngeenkonzo ezakhiweyo ze-wallet, uya kufuna kwakhona ukufumana isipaji sangaphandle sedijithali ukugcina iiTeFi Tokens zakho. Ewe kunjalo, ukuba awubagxeki kuwo nawaphi na amaqonga e-DeFi ukuze ufumane umvuzo.
Inyathelo 2: Bhalisa ngeNdawo yokuThengisa iDeFi ekhethiweyo
Ukuvula iakhawunti ngeqonga lokuthengisa ngengqekembe yeDeFi kulula kunakuqala. Into ekufuneka uyenzile kukugcwalisa ifom yobhaliso ekhawulezayo. Oku kubandakanya igama lakho elipheleleyo, umhla wokuzalwa, idilesi yokuhlala, kunye neenkcukacha zonxibelelwano. Oko kwathethi, ukuba usebenzisa iqonga elilawulwayo njengeCapital.com- kuyakufuneka uqinisekise nesazisi sakho njengenxalenye yenkqubo ye-KYC.
Ungaligqibezela eli nyathelo ngokukhawuleza kakhulu ngokufaka ubungqina besazisi- njengekopi yencwadana yakho yokundwendwela okanye iphepha-mvume lokuqhuba. Kwi-Capital.com uya kuba neentsuku ezili-15 zokugqiba eli nyathelo. Ukuba uyasilela ukwenza oku, iakhawunti yakho iya kunqunyanyiswa ngokuzenzekelayo. Nje ukuba amaxwebhu alayishwe kwaye aqinisekiswe, uya kuphakanyiswa kwiimarike zeDeFi ezininzi - zonke ngaphandle kwekhomishini!
Inyathelo 3: Fundisa iAkhawunti yakho ekwi-Intanethi
Ngaphambi kokuba uthengise iingqekembe zeDeFi kwi-Capital.com, kuya kufuneka uxhase iakhawunti yakho.
Kwi-Capital.com, ungakwenza oku usebenzisa ikhadi lekhredithi, ikhadi ledebhithi, ukuhanjiswa ngocingo kwebhanki, okanye izipaji zombane ezinje ngeApplePay, iPayPal, kunye neTrustly.
Eyona nto ibaluleke kakhulu kuyo, iCapital.com ayihlawulisi nayiphi na idipozithi kwaye unakho ukuxhasa ngemali iakhawunti yakho nge- $ / £ nje eyi-20. 250.
Inyathelo 4: Fumana iNtengiso yeNgqekembe yeDeFi ekhethiweyo
Nje ukuba usete iakhawunti yakho, ukulungele ukuqala ukurhweba ngeemali zeDeFi. Kwi-Capital.com- inkqubo ilula. Konke okufuneka ukwenze kukukhangela imali oyikhethileyo yeDeFi kwaye ucofe iziphumo ezilayishayo.
Umzekelo, ukuba ufuna ukurhweba ngokungaguquki, unokungena ngokulula kwi-'UNI 'kwibar yokukhangela.
Inyathelo 5: Iingqekembe zoRhwebo zeDeFi
Ngoku, konke okufuneka ukwenze kukuchaza inani leethokheni zeDeFi ofuna ukuzithengisa. Ngenye indlela, ungafaka isixa semali ofuna ukuba semngciphekweni kwingqekembe yemali ekubhekiswa kuyo.
Nokuba yeyiphi indlela, nje ukuba uqinisekise iodolo kwi-Capital.com- iya kwenziwa kwangoko. Eyona nto intle kunayo yonke-Capital.com ayizukuhlawulisa ikhulu kwikhomishini okanye kwimirhumo yokuthengisa iingqekembe zeDefi!
Nje ukuba uthenge ezona ngqekembe zeDeFi zibalaseleyo kwiinjongo zakho zezemali, zininzi izinto onokukhetha kuzo etafileni. Umzekelo, ungazibamba, uzithengise, okanye uzivuselele kwi-DeFi protocol efanelekileyo. Ukongeza, njengoko sixoxile kwesi sikhokelo- ungaseta iingqekembe zeDeFi okanye uthathe imali mboleko ngokuzisebenzisa njengesiqinisekiso.
Ngokubalulekileyo, amaqonga e-DeFi sele ephumelele ukuvelisa ukonwaba okukhulu kwintengiso. Isithuba sokwabela abaphantsi amagunya sitsale isixa esimandla sotyalo-mali kwiinyanga ezili-12 ezidlulileyo kuphela - sikhula ngokucacileyo ekuhambeni konyaka. Njengoko ubona ngokucacileyo, kukho inani lamaqonga akwazileyo ukuzisa izibonelelo ezichazwe ngasentla zeDeFi kuluntu ngokubanzi.
Kumatyala amaninzi okusetyenziswa, kukho imiba emibini ngokukodwa ethe yafumana ukubambeka phakathi kwabatyali mali be-crypto kunye nabarhwebi ngokufanayo. Ezi ziiakhawunti zokonga i-crypto kunye nemali mboleko ye-crypto enikezelwa ngamaqonga eDeFi.
Kananjalo, kumacandelo alandelayo esi sikhokelo, siza kujonga kwezi zicelo, kunye nendlela onokuzisebenzisa ngayo ukuze ukhulise iiasethi zakho ze-crypto.
Iiakhawunti zokuLondolozwa kweCrypto kwiiQonga leDeFi
Njengoko besitshilo ngaphambili, ezona ziqonga zibalaseleyo zeDeFi zinenani leemveliso zezemali ezidweliswe ngabathandi be-crypto. Kuwo onke amathuba ahlukeneyo, uluvo lweakhawunti yokonga i-crypto lubonakala luthathela ingqalelo. Iakhawunti yokonga i-crypto yiyo kanye le kuvakala ukuba iyakuba yiyo - ikuvumela ukuba ufumane imbuyekezo yekhusi kutyalo-mali lwakho.
Nangona kunjalo, xa kuthelekiswa neenkqubo zemali zemveli, ezona ziqonga zibalaseleyo zeDeFi zikunika inqanaba eliphezulu kakhulu lomdla kwiidiphozithi zakho. Ngaphambi kokuba uthathe isigqibo sokutyala imali kwiakhawunti yokonga i-crypto, kubalulekile ukuqonda indlela elisebenza ngayo eli shishini.
Zithini iiAkhawunti zokuLondolozwa kweCrypto?
Iakhawunti yokonga i-Crypto yile nto iyitshoyo kwinkcenkce- iakhawunti yokonga imali yakho yedijithali. Endaweni yokufaka iimali ze-fiat kwibhanki yemveli, uya kongeza iiasethi zakho ze-crypto kwiqonga lokubolekisa nge-DeFi. Emva koko, uya kuba nakho ukufumana inzala kwiidiphozithi zakho.
Ngokusisiseko, into oyenzayo kukuboleka iiasethi zakho kubabolekisi be-crypto yeqonga elinye. Ukubuyisa, bahlawula inzala ngokuboleka iiasethi zakho ze-crypto. Kananjalo, iiakhawunti zokonga iicrypto zinceda ekuxhaseni imali mboleko yoontanga enikwa ngamaqonga aphezulu eDefi.
Amaqonga okubolekwa kweDeFi
Ngokwesiqhelo, kwiqonga lokubolekisa eliphakathi- kuya kufuneka uhambe ngenkqubo ye-KYC enzima ukuthatha ithuba lokugcina iakhawunti. Ngapha koko, amaxabiso enzala aya kuboniswa yinkampani ngokwayo. Kwelinye icala, amaqonga e-DeFi asebenza njengemigaqo-ethetha ukuba ayafikeleleka kuye wonke umntu ngaphandle kokuthobela naziphi na iinkqubo ze-KYC.
Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa iiakhawunti azigcinwanga, oko kuthetha ukuba awuzukunikezela ngemali yakho kwiqonga ngokwalo. Kananjalo, amaqonga okubolekisa abelwe abasemagunyeni kunye neeakhawunti zokonga abazinikezelayo zizenzekelayo. Oku kuthetha ukuba inkqubo yolawulo iya kumisela iqondo lenzala.
Kwiimeko ezininzi, amaqonga abolekisayo eDeFi aya kuba nenqanaba lenzala eliguqukayo elisekwe kunikezelo nakwimfuno yeasethi kwiprothokholi efanelekileyo. Ngapha koko, obolekayo angayithatha ngokuthe ngqo imali-mboleko ngeqonga le-DeFi-ngaphandle kokugqitha kwinkqubo yokuqinisekisa okanye ukujonga ityala.
Sigubungela isihloko semali mboleko ye-crypto ngokwembono yomboleki ngokweenkcukacha ezithe kratya kwicandelo elilandelayo lesi sikhokelo. Nangona kunjalo, kule minyaka imbalwa idlulileyo, umbono wokubolekiswa kweDeFi ukhule ngokukuko. Nangona isiza namazinga aphezulu enzala kubaboleki, ukufumaneka kokungabikho kwesiqinisekiso kwenza ukuba amaqonga e-DeFi abe nomtsalane ngakumbi-ngakumbi kwabo bathathwa njengabanamanani amabi emboleko.
Usebenza njani ukuBoleka iDeFi?
Kwezona ziqonga zibalaseleyo zeDeFi, uya kuthi ufumane igama elithi 'isivuno sokulima' - esithetha ngokubekwa kweethokheni ze-ERC-20 ukufumana inzala. Kwiimeko ezininzi, iiakhawunti zokonga i-crypto kunye nokulima imveliso akuhlukanga kangako. Ngale nto ithethwayo, xa uhamba ngeqonga leDeFi, uyakube usebenza njengomboneleli wemali. Oko kukuthi, xa ufaka imali yakho, ziya kongezwa kwi-pool yolwelo.
Ukubuyekeza ngokubonelela ngobutyebi, uya kufumana umvuzo ngokomdla.
Amaqonga abolekisa abelwe kwiindawo ezithile asebenza kuseto lweeprotocol ezizenzekelayo.
Umzekelo, ezona ziqonga zibalaseleyo zeDeFi ezinje ngeCompound kunye neAave bayile amaxwebhu abo-afumanekayo kuye nabani na ukuba afikelele kuwo.
Yonke intengiselwano kula maqonga e-DeFi aqhutywa ngeekhontrakthi ezikrelekrele (Amachibi oTywala).
Oku kuqinisekisa ukuba inkqubo yokuboleka nokuboleka iphathwa ngokuchanekileyo. Iikhontrakthi ezikrelekrele ziya kwenza intengiselwano kuphela ukuba iimeko ezimiselweyo ezichazwe liqonga ziyafezekiswa. Kananjalo, xa uvula iakhawunti yokonga i-DeFi, uthumela imali enkulu kwisivumelwano se-smart.
Ukubuyisa, uya kufumana imbuyekezo ngendlela yethokheni yedijithali okanye iibhondi ezingqina ukuba ungumnini weasethi efanelekileyo. Kwezona ziqonga zibalaseleyo zeDeFi, ezi zivumelwano zenziwe kakuhle kwaye ziphicothwa kuluntu. Nangona kunjalo, njengoko unokucinga-unokufuna ulwazi oluncinci lokufaka iikhowudi ukuqinisekisa idatha.
Namhlanje, awungekhe uvule iakhawunti yokonga i-crypto kuphela, kodwa unokufumana inzala kwiithokheni ezininzi ze-ERC-20 kunye nee-solidcoins.
Ke, ngaba kufuneka uvule i-akhawunti yokonga i-crypto kwiqonga le-DeFi? Ewe, njengoko unokucinga, esona sibonelelo sokuvula iakhawunti yokonga i-crypto kukufumana inzala. Endaweni yokugcina nje iiasethi zakho zedijithali kwisipaji sakho, uya kuba nakho ukufumana i-crypto ngaphezulu kunaleyo uyibolekileyo. Ngokubalulekileyo, awuzukunyusa umnwe - njengoko ukubuyiselwa kwakho kuya kuhlawulwa kuwe ngokungenziwanga.
Nangona kunjalo, kwezi ntsuku, abatyali mali abaninzi bakhetha ukuboleka imali ezinzileyo efana neDAI. Oku kuyakuvumela ukuba ukhule ikomkhulu lakho ngaphandle komngcipheko wokungaziphathi kakuhle okubandakanyeka kwimali yesiqhelo yedijithali. Ngaphaya koko, uninzi lwamaqonga e-DeFi akuvumela ukuba ubambe ezabo iithokheni zolawulo.
Ukukunceda uqonde ukuba zisebenza njani iiakhawunti zokonga i-crypto, senze umzekelo ongezantsi ohlanganisa zonke izinto ezibalulekileyo.
Masicinge ukuba ujonge ukuvula iakhawunti yokonga i-crypto yakho yokubanjwa kwe-Ethereum.
Uqhubela phambili kwiqonga lakho elikhethiweyo le-DeFi ukuseta iakhawunti yakho yokonga i-crypto.
Qhagamshela iqonga lakho le-DeFi kwi-wallet yakho ye-cryptocurrency.
Khetha i-Ethereum kuluhlu lweengqekembe ezixhaswayo ezikhoyo zokubolekisa.
Iqonga liyakubonisa ukuba ungakanani umdla oza kuwufumana kwisibonda sakho.
Khetha ukuba ufuna i-Ethereum engakanani.
Xa sele ulungile-qinisekisa utyalomali.
Khumbula ukuba kumaqonga amaninzi, ezo ntengiselwano ziya kukuhlawula iifizi zerhasi. Kananjalo, qiniseka ukuba ujonga iindleko ezichaphazelekayo ngaphambi kokuba usete iakhawunti yakho yokonga i-crypto. Ngoku, njengoko besichukumisile ngaphambili-xa ubamba i-cryptocurrensets, ngokuyintloko usebenza njenge-crypto lender.
Uninzi lwala maqonga eDeFi abonelela ngemalimboleko ye-crypto-evumela abanye ukuba baboleke iiasethi zakho. Kule meko, uya kuba usebenzisa iiasethi zakho zedijithali njengesibambiso, endaweni yokuzifaka kwiakhawunti yokonga.
Kwicandelo elingezantsi, sicacisa ukuba ungazuza njani kwimali mboleko ye-crypto kumaqonga alungileyo eDeFi.
Imali mboleko zeCrypto kumaQonga eDeFi
Ukuba uthanda i-crypto, usenokuba sele uqhelana nomxholo wesicwangciso 'sokuthenga nokubamba'. Ukubeka ngokulula, xa 'uyi-HODLing' iiasethi zakho zedijithali, uzigcina zikhuselekile kwisipaji esikhuselekileyo- de ube ukulungele ukuphuma kwemali. Nangona kunjalo, njengoko kuhamba, ushiya nje iingqekembe zakho zemali zihleli zijikeleze isipaji.
Iimali-mboleko ze-Crypto kunye namaqonga okubolekisa anikezela ngesisombululo esisesinye koku - apho unokubambisa khona iiasethi zakho ze-crypto ukuze ufumane imbuyekezo mboleko. Ngokucacileyo, imali mboleko ye-crypto isebenza njengokubuyela umva kweeakhawunti zokonga. Endaweni yokuba ube ngumbolekisi kwaye ufumane inzala kwiiasethi zakho, uya kuba usebenzisa i-cryptocurrensets yakho njengesibambiso ukufumana imali-mboleko.
Zithini iiMali mboleko zeCrypto?
Ngalo naluphi na uhlobo lotyalo-mali, ukufikelela kwimali yenye yezinto eziphambili. Ngamanye amagama, kungcono ukuba ukwazi ukukhupha iiasethi zakho nanini na. Nangona kunjalo, ngokungafaniyo nokukhuseleka kwendabuko, imakethi ye-cryptocurrency yahluke kancinci.
Masicinge ukuba ungumnini we-10 ye-BTC, kodwa ujonge ukuhlawula amatyala.
Ngokunikwa kwintengiso yangoku, awufuni kuthengisa ukubamba kwakho kuba ulindele ukuba ixabiso le-BTC lonyuke kakhulu kwixesha elide.
Kananjalo, awufuni kukhuphela i-crypto yakho, kuba xa uyithenga kwakhona emva komhla-unokuphela uneBitcoin embalwa.
Kulapho amaqonga abolekisa nge-crypto aqala khona ukudlala. Kwimeko enjalo, unokusebenzisa i-Bitcoin yakho njengesibambiso, ukuze ufumane imali mboleko ehlawulwa kwi-crypto okanye kwi-fiat currency. Nangona kunjalo, kuthathelwa ingqalelo imeko eguqukayo yeemali ze-imali yedatha, kuyakufuneka wenze i-BTC ngaphezulu kwexabiso lemali mboleko oyifumanayo.
Typically, ezo mali mboleko ze-crypto zikwafuna ukuba uhlawule umrhumo ongezantsi. Oku kuya kwahluka ukusuka kwelinye iqonga le-DeFi ukuya kwelinye. Umzekelo, kwi-Nexo, unokufumana imali mboleko ye-crypto kwi-5.9% ye-APR kuphela. Ngelixa kwiBlockFi, unokufumana amaxabiso enzala asezantsi njenge-4.5%.
Nje ukuba uhlawule imali mboleko kunye nenzala, iiasethi zakho ze-crypto ziya kubuyiselwa kuwe. Iidipozithi zakho ze-crypto ziya kuba semngciphekweni ukuba uyasilela ukubuyisa imali-mboleko, okanye ixabiso lamatyala akho obambiso. Kule meko, kuya kufuneka ungeze isibambiso ngakumbi.
Esinye sezibonelelo eziphambili zemboleko mali ye-crypto kukuba awukho phantsi kokuqinisekiswa okanye ukujongwa kwetyala. Ngamagama alula, xa kuthelekiswa nokubhankwa ngokwesiko - ukubolekwa kwe-crypto kufikeleleke ngakumbi. Kananjalo, akukho mfuneko yokuba ujongane neetsheki esekwe kwimbali yakho yamatyala okanye kumvuzo. Awona maqonga mahle eDeFi ayakuvumela ukuba uthathe isigqibo malunga nemali mboleko, ikunika ubhetyebhetye ngakumbi.
Imali mboleko yeDeFi Crypto ngaphandle kwesibambiso
Ngelixa uninzi lwamaqonga e-crypto esembindini efuna ukuba ubeke isibambiso, unokufumana kwakhona amaqonga eDeFi akunika imali mboleko ngaphandle kokufaka ikhona iimpahla. Oku ikakhulu kubizwa ngokuba yimali mboleko ye-crypto engakhuselekanga, enikezela ngetyala elifutshane.
Umzekelo, elinye lawona maqonga abalaseleyo eDeFi -Aave, ikunika ukufikelela kwimali mboleko yeFlash- apho ungazukucelwa ukuba ubonelele ngesibambiso. Endaweni yoko, uya kuba nakho ukuboleka iiasethi okoko uhlawula imali mboleko kwitransekshini enye ye-blockchain.
Nangona kunjalo, iimali mboleko ze-crypto ezingakhuselekanga ikakhulu zenzelwe abaphuhlisi. Kungenxa yokuba uyakufuna ukwakha ikhontrakthi efanelekileyo ukuze ucele imali mboleko, kwaye uyihlawule kwintengiselwano efanayo. Kananjalo, ukuba ujonge ukuthatha inxaxheba kwimali mboleko ye-crypto ngaphandle kwekholaeral, qiniseka ukuba uqinisekile ngendlela inkqubo esebenza ngayo.
Amaqonga okubolekwa kweDeFi Crypto
Njengoko usenokuba uyazi, ezona ziqonga zeDeFi zibekwa kwindawo enye, apho utshintsho luzenzekelayo, endaweni yokuphathwa ngabantu. Umzekelo, ababoneleli beDeFi abanjengoAave kunye neCompound basebenzisa iikhontrakthi ezifanelekileyo ezisebenzisa ii-algorithms ezisebenza kwiinkqubo zayo ukwenza ukuhlawulwa kwemali mboleko okuzenzekelayo.
Ngapha koko, ezi protocols zicace gca, njengoko zakhiwe kwi-blockchain. Ngokungafaniyo neqonga eliphakathi, akukho mabhunga olawulo-yiyo loo nto ufikelela kwimali mboleko ye-crypto ngaphandle kokugqiba inkqubo yokuqinisekisa. Ukongeza, unokufumana imali mboleko ye-crypto kwiimali ze-fiat, iingqekembe zeDeFi, okanye ii-solidcoins ezinje nge-USDT.
Isebenza njani iMali mboleko yeDeFi Crypto
Ukucoca inkungu, senze umzekelo wendlela imali mboleko ye crypto esebenza ngayo ngokubonakalayo.
Masithi ufuna ukuthatha imali mboleko ye-crypto usebenzisa iingqekembe zakho ze-BTC njengesibambiso.
Ufuna imali mboleko kwi-UNI.
Oku kuthetha ukuba kuyakufuneka ubeke ixabiso langoku le-UNI kwi-BTC.
Ngokwamaxabiso entengiso akhoyo, i-UNI enye ilingana ne-0.00071284 BTC.
Umboneleli wakho we-crypto omkhethileyo ukuhlawulisa inzala ye-5%.
Emva kweenyanga ezimbini, ukulungele ukuhlawula imali mboleko kwaye uhlawule iBitcoin yakho.
Oku kuthetha ukuba kuya kufuneka uyibeke imali-mboleko kwi-UNI kunye ne-5% yenzala.
Nje ukuba uhlawule imali mboleko, uyakufumana idiphozithi yakho yeBitcoin.
Njengoko ubona, kulo mzekelo-uyifumene imali mboleko yakho kwi-UNI ngaphandle kokuba uthengise iBitcoin yakho. Kwelinye icala lentengiselwano, umbolekisi we-crypto ufumene i-UNI yabo yoqobo, kunye nentlawulo yenzala ye-5%. Oko kwathethi, kubalulekile ukuba kuthathele ingqalelo ukungazinzi kwemarike yemali eyi-cryptocurrency uqobo.
Kananjalo, kuya kufuneka ubambe ngaphezulu. Umzekelo, kwi-MakeDAO-kuyakufuneka ubeke idiphozithi exabisa i-150% yexabiso lemali mboleko yakho. Ke, masithi ufuna ukuboleka i-UNI eyi-100 yeedola. Kwi-MakerDAO-kuyakufuneka ubeke i-BTC eyi-150 yeedola njengesibambiso ukuze ufumane imali-mboleko.
Ukuba ixabiso ledipozithi ye-BTC lehla ngaphantsi kweedola ezili-150, kuya kufuneka uhlawule isohlwayo sokucinywa. Nangona kunjalo, imali mboleko ye-crypto inokuba yenye yezona ndlela zisebenzayo zokuxhamla kwisithuba seDeFi. Ayizukukunika ukufikelela kwangoko kwimali yokuhlawula amatyala kodwa iya kukusindisa kubunzima bokuhamba ngeenkonzo zemali zemveli.
Iingqekembe zeDeFi eziPhambili-Ezantsi
Ekugqibeleni, umzi mveliso weDeFi uhlala uqhubeka. Ngexesha nje elifutshane, amaqonga e-DeFi akwazile ukukhula ukusuka ekubeni yinxalenye yovavanyo lwehlabathi lezemali ukuya kwindalo enkulu namhlanje. Nangona inokubonakala njengecandelo le-niche okwangoku, kunokwenzeka ukuba izicelo ze-DeFi ziya kwamkelwa kungekudala kwintengiso ebanzi.
Nje ukuba le nto iqheleke, izinto ezahlukeneyo ze-DeFi ziya kuthontelana kubomi bemihla ngemihla nakwezemali. Ngamanye amagama, iDeFi inethuba lokutshintsha ilizwe lezezimali njengoko sisazi.
Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba imakethi yezemali esecaleni iseseyintsha ngokufanelekileyo. Njengalo naluphi na olunye utyalomali, kusekho umngcipheko onokubakho apha. Kananjalo, uyakufumanisa kufanelekile ukuba wenze inkuthalo yakho kwaye ufumane ukuqonda ukuba le nkqubo intsha yezemali iqhubeka njani.
I-DeFi imele ukwabiwa kwemali ezabelweyo -ilixesha elinikwa iinkonzo zemali ezingenagunya liphambili. Ukukunika umbono ongcono, uninzi lwamaqonga ezemali namhlanje alawulwa yinkampani enye. Xa kuthelekiswa, iqonga le-DeFi liqhutywa yinkqubo yolawulo eyakhiwe kwi-blockchain kwaye iqhuba isebenzisa ii-asethi ezisemthethweni ezinje ngee-cryptocurrensets.
Yintoni ukusetyenziswa kweDeFi?
IDeFi licandelo elikhula ngokukhawuleza. Namhlanje, unokufumana amaqonga aliqela eDeFi abonelela ngeenkonzo ezizenzekelayo. Oku kubandakanya ukutshintshiselana, ukubolekisa, ukuboleka, i-inshurensi, ulawulo lweeasethi, kunye neminye imibutho engalawulwa liqela elinye.
Zithini amathokheni eDeFi?
Amaqonga amaninzi eDeFi asungule eyabo ithokheni yemvelo ye-DeFi eya kuthi incede kulawulo lwenkqubo yayo. Abaphathi bezi mpawu zemveli banokufumana amalungelo okuvota kwinkqubo yendalo yeDeFi.
Zeziphi ezona ngqekembe zeDeFi zibalaseleyo?
Ezona mpawu zintle zeDeFi bezikade zithandelwa ukusukela ekuqaleni kowama-2021. Ngexesha lokubhalwa - ezinye zezona mpawu zintle zeDeFi ngokubhekisele kwiimali zentengiso zibandakanya i-UNI, i-LINK, i-DAI, i-ZRX, i-MKR, i-COMP kunye ne-CAKE.
Uyikhetha njani eyona ngqekembe yeDeFi yokutyala imali kuyo?
Njengayo nayiphi na iasethi ethengiswayo, phantse akunakwenzeka ukuba uqikelele ukuba yeyiphi na imali yeDeFi eya kukufumanela eyona mbuyekezo iphezulu. Nangona kunjalo, unokufumana ukuqonda okungcono kwintengiso yeDeFi ngokufunda ngeendlela ezahlukeneyo zeDeFi kunye neemeko zabo zokusebenzisa.
Thenga iTokeni yethu ngoku "i-DeFi Coin" nge-Launch yethu ethambileyo!
Thenga kwiDeFi Coin ngokuThenga kwiDeFi Coin ngoku Thenga iThenda eTshayelayo eNje ngoku!
IDeFiCoins.io ngumzamo wokubonelela ngolwazi olunolwazi onokuluqhuba kwaye ufumane imali ngokutyala iprojekthi efanelekileyo.
Iingqekembe zeDeFi zinikezelwe ukugcina ukufundwa kwayo kusesikhathini kunye neendlela zamvanje kwindawo yentengiso yeDeFi. Iintatheli zethu kunye nabaphandi benza uphando olucokisekileyo kwaye bakunika inkonzo ebalaseleyo.
Njengoko icandelo le-DeFi lifumana i-hype enkulu, zonke iithokheni ezisebenza kwi-ecosystem ye-DeFi kufanele ukuba zenyuka. Kulapho singena khona, sivumela abafundi bethu ukuba basebenzise eli thuba kwaye bafumane inzuzo enkulu.
Bitcoin BTC ICompound Ezezimali zeCream Crypto Ijika lezezimali ityala Itekhnoloji esetyenzisiweyo Defi DEX Ethereum EzeMali IRS Pizza I-Strelka Vault I-UNI Ukungatshintshi Ewe. Ezemali Ixabiso leMali YFI Ukuwa kweYFI